Hurumende Yokurudzirwa Kuvanduza Mitemo Kuti MaIndustiri Asarambe Achivharwa
Vamwe vakuru vakuru vemaindasitiri vanoti kuve nemitemo isina kujeka uye kuchinja chinja kwemitemo ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti kumutsiridza maindasitiri kunetse munyika.
Pave nekubudirana pachena pasina kurova imbwa pakavigwa mupinyi pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevemaindasitiri, vemabhizimisi negurukota remaindasitiri Doctor Sekai Nzenza.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, mudunhu reMatabeleland VaShepherd Chawira vaudza musangano uyu kuti gore rakapera kushanda kwemaindasitiri kwakadzikira kubva muzvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatatu nezvitanhatu kubva muzana (capacity utilization fell from 48% to 36).
VaChawira vati kuchinja chinja mitemo ine chekuita nezvehupfumi kunoitwa nehurumende ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti maindasitiri arambe achitatarika.
VaChawira vati hurumende inofanirwa kukoshesa kumutsurudza makambani akaita seZiscosteel uye kuona kuti National Railways of Zimbabwe, neHwange zviri kushanda zvakanaka vachiti makambani aya akakosha zvikuru mukumutsurudza maindasitiri munyika.
Vati kudomwa senzvimbo yeSpecial Economic Zone kwakaitwa nzvimbo dzemaindasitiri muBulawayo kwange kuchagona kubatsira kumutsurudza maindasitiri muguta iri asi hurumende yakachinja mitemo yavati yaive ichabastira kuti izvi zviitike.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce VaGolden Muwoni avo vataurawo pamusangano uyu vatsinhirawo maonero aVaChawira vakati maindasitiri nemabhizimisi munyika ari kutatarika nekuda kwekuti mari yemuno haina simba vachitiwo hurumende inofanirwa kuita kuti izvi zvigadziriswe.
VaMuwoni vati hurumende haifanirwe kuramba ichichema nerekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumawirira.
Vati kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveminda zvinogona kubatsira kuti nyika iwane chikafu chakakwana zvobatsirawo kumutsurudza maindasitiri.
Vamwe vataurawo pamusangano uyu vati kushomeka kwemagetsi nemafuta edzimotokari kuri kukanganisawo mashandiro akanaka emabhizimisi nemaindaistiri.
Doctor Nzenza vaudza Studio 7 kuti vanonzwisisa chose matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevemaindasitiri. Vati shuviro yavo ndeyekuti guta reBulawayo ridzokere pakuve muzinda wemaindasitiri akasiyana-siyana izvo vati zvinogona kubatsira kumutsurudza mamwe maindasitiri munyika yose.
Vaenderera mberi vakati vane chivimbo chekuti kutaurirana sekwaitika pamusangano uyu kunobatsira kugadzirisa matambudziko ataurwa.
Doctor Nzenza vati vachapira kudare remakurukota zvose zvakurukurwa pamusangano wanhasi.
Vachitenda kuuya kwaDoctor Nzenza kuzosangana navo, mutevedzeri wemukuru weCZI VaJoseph Gunda vati hurumende inofanirwa kusiya tsika yekutaura zvaisingazoite vakatiwo vemabhizimisi nemaindasitiri vane chitsvambe chikuru chekuti vashande pamwe nehurumende kuitira kuti hupfumi hwenyika hugogadzikana.
Musangano uyu uri kuuya apo maindustiri akawanda kuMatabeleland akatarisana nematambudziko makukutu.
Kambani yeAnolle Castings and Engineering inoti inogona kuvhara nekushaya simbi dzekushandisa sezvo ZISCO isiri kushanda zvakanaka. Kambani yeFootwear and Rubber Industries (Pvt) Ltd yakatovhara muna Gunyana ikagumura vashandi mazana mashanu.
CZI iri kuyambira kuti kushanda kwemaindastiri kunogona kuderera kusvika pazvikamu makumi maviri nemanomwe kubva muzana mukupera kwegore kana zvinhu zvikasagadziriswa nechimbi chimbi.
Musangano uyu wange wakarongwa nesangano reCZI richishanda pamwe chete nebazi remaindasitiri.